Tag: guulaha macaamiisha | Martech Zone
Tag: guulaha macaamiisha
5 Saaxiibadaha SaaS ee Ku Dhaqan Hab-Dhaqannada Ugu Fiican
Jimco, Juun 12, 2020 Jimco, Juun 12, 2020 Hardik Oza
Way dhammaadeen maalmihii ay kooxaha guusha macmiilku ku daalanaayeen wicitaanno aan xadidnayn iyo macaamiisha ay wax ka qabtaan. Sababtoo ah hadda waa waqtigii la yarayn lahaa oo la heli lahaa wax badan marka la eego guusha macaamiisha. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa xeelado xariif ah, iyo laga yaabee xoogaa caawinaad ah shirkadda horumarinta barnaamijka SaaS. Laakiin, xitaa ka hor taas, dhammaantood waxay hoos ugu dhacaan ogaanshaha dhaqamada saxda ah ee guusha macaamilka. Laakiin marka hore, ma hubtaa inaad ka warqabto ereyga. Aynu
Xalay waxaan helay fursad aan caadi aheyn oo aan ku aado labada kulanba oo aan dhageysto seddex jeer Indianapolis 500 guuleyste, Helio Castroneves. Waxaan marti ku ahaa marti-wadaha iyo tababaraha waxqabadka David Gorsage, oo i weydiiyay haddii aan soo bandhigi doono wararka ku saabsan baraha bulshada inta ay xafladda socoto. Markii aan abaabulay hashtags, aan raacay kafaala qaadayaasha, oo aan bartay VIP-yada qolka, mid ka mid ah xirfadleyaasha tartanka ayaa si aamusnaan ah ugu tiirsaday oo weydiiyey: Runtii ma tihid la-taliye xagga warbaahinta bulshada ah? The
Gainsight: Aragtida Macaamiisha iyo Haysashada
Talaado, Maarso 18, 2014 Talaado, Maarso 18, 2014 Douglas Karr
Shirkadda Gainsight waxay soo saartay Siidaynta Guga ee maareynta Maareynta Guusha Macaamiil, taas oo u sahleysa xitaa suuqleyda inay helaan aragtida macaamiisha 360 ° oo ay iskaashi la yeeshaan daneeyayaasha kale ee guuleysta macaamiisha guud ahaan ururka iyagoo adeegsanaya awoodda falanqaynta xogta. Shirkadaha waaweyn oo waaxyo badan oo kaladuwan - laga bilaabo iibka illaa horumarinta wax soo saarka iyo suuqgeynta - suuqleyda waxaa lagu xujeeyaa qodobo xog duwanaan ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa macaamiisha, haddana waa inay sameeyaan dadaal wadajir ah si ay u sii hayaan macaamiisha